“Sweden waxay u baahantahay 100 000 soo galooti ah sanad kasta” | Somaliska
Agaasimaha Xafiiska Shaqada (Arbetsförmedlingen) ayaa sheegay in Sweden ay u baahantahay 100.000 oo qof sanad kasta si wadanka uu barwaaqo ugu socdo. Mikael Sjöberg ayaa sheegay in haddii tirada soo galootiga ay intaasi ka yaraato ay Sweden soo wajihi doonto dhibaato xaga dhaqaalaha ah.
– Haddii aan hoos u dhigno tirada soo galootiga, waxaa sidoo kale hoos u dhacaya dhaqaalaha mustaqbalka.
Warbixinta oo ay Arbetsförmedlinge u gudbiyeen dowlada ayaa lagu sheegay in sanad walba ay 22 000 Swedish ah shaqada ka fariistaan, iyadoo loo baahanyahay cidii badali lahayd dadkaasi. Maadaama qoysaska Swedishka aysan dhalin caruur badan ayay taasi keenaysaa in dadka shaqada ka fariistay ay badalaan soo galootiga.
ilaa sanadkii 2006 ayaa soo galootiga shaqayn kara ee Sweden soo galay warbixinta lagu sheegay in ay ahaayeen 304.000 qof. Tirada soo galootiga shaqeeya ayaa ku xiran heerkooda waxbarashada, iyadoo dadka heerka jaamacadeed gaaray ay shaqo helaan halka kuwa kale ay dhibaato ka haysato suuqa shaqada.
Warbixinta Arbetsförmedlingen ayaa lagu sheegay in Sweden ugu yaraan ay baahantahay 65 000 soo galooti ah, balse ay wanaagsantahay ilaa 90 000 kun sanad walba. Taasi haddii la waayo ayaa dhaqaalaha canshuuraha ay hoos u dhici doonaan, taasoo saamayn weyn ku yeelanaysa guud ahaan wadanka, waxbarashada, daryeelka dadka waaweyn, caafimaadka iwm.
Mikael Sjöberg ayaa sheegay in dooda ku saabsan soo galootiga ay ku salaysan tahay qarashka oo keliya balse dadka siyaasada ku jira aysan eegin muhiimada soo galootiga ee mustaqbalka iyo dhaqaalaha.
“Cayrta waalidka ha laga yareeeyo si ay u shaqeystaan”
in lanagu xamaasho waa ogalnahay waayo anagaa idin soo doonanay
April 11, 2015 at 14:44
So galooti Cusub xagee lagaynaya Kuwii joogey ayaba ku baqtiyee…
Warbixintan oo kale jarmalka aya soo saaray bishi hore waxa uuna yiri daraasaad la sameeyey waxa lagu ogaaday jarmalka inuu u baahanyahay 400,000 oo qaxooti ah sanad walbo ilaa sanadka 2050 Marka Yurub anaga noona daneenayan ee ayaga aya nagu daneysanayo
Waxaa xaqiiq ah hadii aad waxbarasho leedahay sida xirfad ama aqoonta kale in aad shaqo helayso oo hadana aad firfircoontahay kalsoonina leedahay.
sweden dawlada ayaa dadka soo galootiga rabta jecelna inay soo galatigu wadanka la qabsadan shaqana tagan si aay cashuur ubixiyaan wadankuna unoqdo barwaaqo lakiin dadka swedesh ka ah 70% waa dad cunsuriin ah anan jeclayna soo galootiga ee somaliyeey aaynu isku dayno inan wax ka barano aqoona ka helno wadankani si aan wadankeeniina ugu cawino kuwa cunsuriinta ahna kartideena utusno !
Dunidan qof waliba maslaxadiisa uu fiirsanayaa. Dadka caqliga ilaah u hibeeyana mar horeey fahan sanaayeen sheekada ay ku cel celiyaan reer galbeedku oo ah xuquuqda aadmiga, caawinaada soo galootiga iyo dib u dajintooda. Qof waliba waxay u arkaan lambar. Innagana waxaa nalooga baahan yahay in aan diinteena fahanno ku dhaqanno dadka nasoo dhaweeyana aan gaarsiino dalalka reer galbeedka iyo kii aan asal ahaan ka soo jeednana aan nabada iyo amniga ka shaqeeno oo aan meel cidlaa aanaan ka didin.
Arintii labada sano yaa war ka haayo kkkkkkkkkkkkkk
arinti labada sano waa halkeedi oo weli waxba iskama badalin.
Waa wax la layaabo hadalkan 3 sano aya kaam ku jirna dad somali ah oo inta ka badan joga wadan oo sharci lo diidayna wey jogan mey dadka dhibateysan siiyan sharciga wadanke ALLAHA nabad hanooga dhigo qaxooti nimo waa wax aanan wngsaneen